Ochie Ochie Na Ngwurugwu - Ezi Ntụziaka
ị nwere ike ifriizi ude nke broccoli cheese ofe
kedu ka esi ama ma soseji sie ya
kalori na cracker gbọmgbọm hashbrown casserole
-esi mee ka cheese cheese na chiri velveeta
ebee ka m ga-ahụ achicha foneelu
Ochie Ochie Na Ngwurugwu
Ochie Ochie Na Ngwurugwu bụ nri ezinụlọ na-enwekarị obi ụtọ ma na-atọ ụtọ! Emere usoro a dị mfe site na ncha gụnyere ụmụ irighiri mmiri na ọkụkọ na-atọ ụtọ na broth a na-arụ n'ụlọ.
Ntụziaka a na-amalite site na ọkụkọ ọkụkọ niile etinyere na nro zuru oke na nri na oge. Mpempe akwụkwọ dị mfe nke ejiri ihe eji esi nri na-esi ofe ruo mgbe ọ ga-adị nro. Nke a bụ ọkacha mmasị ezinụlọ nke a ga-arịọ ugboro ugboro!
ihe iji jee ozi na taco salad
Arụ ụlọ na dumplings dị mma ol nri nkasi obi kachasị mma. Ọ bụ ezie na m hụrụ n'anya ngwa ngwa ma dị mfe Okuko ite na dumplings , ọ dịghị ihe ọ bụla dịka nri nke ejiri ụlọ rụọ kpamkpam.
Ime ọkụkọ ochie na dumplings site na isi dị mfe karịa ka ị ga-eche. A na-etinye oge ka ukwuu iji hapụ ofe simmer ruo mgbe ọ ga - atọ ụtọ ma sie ọkụkọ ka ọ zuo oke.
Ntụziaka a na-amalite site na ọkụkọ, yabasị na karọt na-eme ka ọkụ. Mgbe ị na-eme ofe m na-ahọrọ nnukwu yabasị ma hapụ akpụkpọ ahụ ka ịgbakwunye ụcha na ekpomeekpo na ofe. Enwere ike ịtinye na ahịhịa ọkacha mmasị gị dịka akwukwo akwukwo, nsị nke anụ ọkụkọ na pasili ọhụrụ. Ozugbo a na-esi ọkụkọ ọkụkọ, a na-ewepụ ya na broth yana akwụkwọ nri.
Anyị na-eri nri veggies dị ka nri n'akụkụ mana nweere onwe gị ịkpụ carrots & celery ma tinye ha na ofe gị.
Ọ bụrụ na ị chetụla otu esi eme dumplings site na ncha, ị ga-ahụ n'anya ka ọ dị mfe! Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-enwe mmasị iji Bisquick mee ha, achọpụtara m na ha dịkwa mfe ime ihe nwere ike ịbụ na ị nwere nri gị!
agwa agwa na salsa uzommeputa maka canning
Etinyekwala onwe gị na ịme ka dumplings gị zuo oke, ọ dịghị mkpa etu esi egbutu ha. Naanị ihe ị ga-achọ ijide n’aka bụ na akpọrọ mgwakota agwa gị n’ihe dịka 1/8 ”. Nke a na-enye ndị na-ebugharị nri ka ha nwee ike ịdị n'otu.
Ná ngwụsị nke isi nri, anyị na-achọ iji obere ọka na mmiri mee ka broth ahụ sie ike ozugbo na-esi nri. Naanị gwakọta nha nha ọnụ ma gbakwunye ntakịrị n'otu oge ruo mgbe ofe ahụ rutere n'ụzọ kwekọrọ. Y’oburu na ichoro ofe ogwu mbu, nweere onwe gi itinye obere mmiri ara ehi ma obu ude di nkpa mgbe ebuchara nri.
ihe di iche na etiti marinara na Pizza sauce
4,93site na333votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe30 Nkeji Oge nri1 aka elekere iri na ise Nkeji Oge zuru ezu1 aka elekere Anọ Nkeji Ọrụ8 servings Onye edemedeHolly Nilsson Ochie ochie ọkụkọ na Dumplings bụ nri ezinụlọ na-amasịkarị nke na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ! Bipute Ntụtụ
▢1 ọkụkọ bee n'ime iberibe
▢3 nnukwu karọt bee n'ime ụzọ atọ
▢3 stalks celery bee n'ime ụzọ atọ
▢8 iko obere sodium ọkụkọ efere
▢nnu & ose nụrụ ụtọ
▢n'ọnụ mmiri akwukwo ma ọ bụ a tuo nke ulo ozuzu okuko sizinin nhọrọ
▢1 ¾ iko ntụ ọka gbakwunyere maka uzuzu
▢⅓ iko na-eme mkpụmkpụ
▢½ ngaji ntụ ịme achịcha
▢¾ iko mmiri ara
▢4 tablespoons ọka
▢pasili maka garnish
Ikpokọta ọkụkọ, yabasị, carrots na celery n'ime nnukwu ite. Oge nụrụ ụtọ.
Tinye ọkụkọ ọkụkọ. Weta na obụpde, belata okpomọkụ, gbanye minit 45-60 ma ọ bụ ruo mgbe ọkụkọ dị nro. Mgbe ofe na-akụ, kwadebe dumplings n'okpuru.
Wepu ọkụkọ na akwụkwọ nri na broth. Wepu akpukpo aru na okpukpu ma gbupu okuko ozo, dozie ya.
Jiri nwayọ tinye dumplings na ofe. Simmer 15-20 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe obi.
Mee ka ọkụkọ (na akwụkwọ nri ma ọ bụrụ na achọrọ) n'ime broth ma sie ihe dị ka minit 2-3 ma ọ bụ ruo mgbe iwe dị ọkụ.
Gwakọta ntụ ọka, ntụ ntụ, nnu na mkpụmkpụ na ndụdụ ruo mgbe agwakọtara mkpụmkpụ.
Tinye mmiri ara obere na obere oge ma gwakọta ruo mgbe agwakọtara (ị nwere ike ọ gaghị achọ ya niile, ịchọrọ mgwakota agwa dị nro ma ọ bụghị nke nnyapade).
Igwakorita ugboro ole na ole n'elu ala ruo mgbe mgwakota agwa dị larịị.
Jiri aka gị kpokọta ntụ ọka gị ma gbanye ntụ ọka to out. Bee mgwakota agwa n'ime eriri 1 ″ x 2 ″. Ntụ ọka n'ụba iji zere ịrapara.
Esi nri na efere dị ka a gwara gị n’elu.
TO ọkpụrụkpụ na-eto eto (Nhọrọ)
Na obere efere ikpokọta 4 tablespoons cornstarch na 4 tablespoons mmiri.
Tinye na esi ofe ntakịrị ntakịrị oge na-akpali iji ruo nhazi.
A pụrụ ijere carrots na celery n'akụkụ ma ọ bụ belata ma tinye ya na broth tinyere ọkụkọ. Nutrition ọmụma nyere bụ atụmatụ na ga-adị iche na-adabere na isi nri ụzọ na ụdị nke Efrata eji.
Calorisị:464,Carbohydrates:32g,Protein:26g,Abụba:25g,Abụba Ajuju:7g,Cholesterol:73mg,Sodium:Ogbe 322mg,Potassium:Ogbe 599mg,Eriri:1g,Sugar:3g,Vitamin A:4060IU,Vitamin C:4.4mg,Calcium:Ogbe 77mg,Iron:2.8mg
Isiokwuọkụkọ na dumplings, site na ncha, arụrụ n'ụlọ, Ochie ọkụkọ na karama N'ezieIsi N'ezie Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Okuko ite na dumplings
4 Riceen Osikapa Casserole
Creamy Chicken Noodle Casserole (site na ọkọ)